Waraysiyada, 22 December 2014
Isniin 22 December 2014
Prof. Cabdiweli Gaas, madaxweynaha Puntland oo wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa sheegay inuu diidan yihiin qeybo ka mid ah heshiiskii Djibouti ay ku gaareen Somalia iyo Somaliland, isagoo sheegay in labadoodu aysan isku koobi karin masiirka Soomaaliya.
Khilaafka Dowladda Federaalka Soomaaliya
Wasiirka Garsoroka iyo Arrimaha Datsuurka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa manata sheegay in shaqada dib u habaynta garsoorka iyo tan dib u eegista dastuurka ay socoto.
MURANKA XEERKA GARSOONKA
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa sheegay in la doonayo in Garsoorka Soomaaliya la hoos geeyo Wasaaradda Caddaaladda ee dawladda.
Dowladda oo La Wareegtay Baraawe
Xaaladda magaalada Baraawe ayaa cakiran iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Kuwa AMISOM ay dul fahdiyaan magaalada. Goor hore oo saaka ahna, unug ka tirsna ciidanka ayaa tagay degaanka cirifka magaalada ee agagaarka Huteel Kolombus.
Muranka Garoomada Diyaaradaha Gaalkacayo
Maamullada Galmudug iyo Puntland ayaa wali waxaa ka taagan muran ku aadan garoomada diyaaradaha Gaalkacyo. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inuu ka noqday xariyaadii uu ku soo rogey garoonka diyaaraha ee ay maamulaan maamulka Puntland.
Rag Al-shabab Ka Tirsan oo Jarmalka Lagu Xiray
Sadex qof oo laba ka mid ah ay yihiin Somali heysata jinsiyadda Jarmalka, oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-shabab ayaa dhawaan lagu qabtay dalkaasi
HRW: AMISOM Kufsi ayay Somalia ka Geysteen
Hay’adda Human Rights Watch ayaa ku eedeysey ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM inay kufsi u geystaan gabdho yaryar oo Soomaali ah, kuwaas oo inta badan xeryaha ciidamadaasi u doonta dawooyin iyo samafal.
Falanqeyn Amiirka Cusub ee al-Shabab
Ururka al-Shabab ayaa shalay ku dhowaaqay in Sheekh Axmed Cumar Abu Cubaydah uu yahay Amiirka Cusub ee Xarakada kadib markii duqayn toddobaadkii hore lagu dilay hoggaamiyihii hore ee ururkaasi Axmed Cabdi Godane.
Idaacadaha Kulmiye iyo Simba oo La Xiray
Magaallada Muqdishu waxaa dawladdu xirtay laba idaacadood oo madaxbannaan oo lagu kala magacaabo Kulmiye iyo Radio Simba. Idaacadahan ayaa VOA u sheegay in loo xiray inay sii daayeen warar la xiriira dilkii hoggaamiyhi ururka al-Shabab Axmed Godane
Al-shabab oo Laga Qabsaday Buulomareer
Ciidamada Dowladda iyo Amisom ayaa dagaal uga qabsaday ururka Al-shabab degmada Buulo-Mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Askari ka tirsan Amisom, iyo 11 Al-shabab ah ayaa ayaa ku dhintay dagaalka
Djibouti:Weerarkii Garoonka Argagixiso Lug Kuma Laha
Dowladda Djibouti ayaa sheegtay in weerarkii toogassho ee ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalad Djibouti galabnimadii Isniinta uusan wax lug ah ku lahayn kooxaha argagixsada ee gobolka ka howlgala.
Ra'iisul-wasaaraha oo Booqday Dhadhaab